Sargaal katirsanaa dowladda Soomaaliya oo lagu dilay qarax gaari oo ka dhacay gudaha Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSargaal katirsanaa dowladda Soomaaliya oo lagu dilay qarax gaari oo ka dhacay gudaha Muqdisho
February 28, 2017 Abdi Omar Bile Somalia 0
Sargaal katirsanaa dowladda Soomaaliya oo lagu dilay qarax gaari oo ka dhacay gudaha Muqdisho. [Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Sargaal katirsanaa dowladda Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaco ah lagu dilay qarax ka dhacay gudaha Muqdisho, sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaashu.
Cabdiraxmaan Afleershe ayaa la dilay kadib markii miino gaarigiisa loogu rakibay ay ku qaraxday gudaha degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho, sida ay sheegeen goobjoogayaashu.
Sargaalka la dilay ayaa la shaqayn jiray dowladda hoose ee Muqdisho, sida ay wararku sheegayaan.
Ma jirto cid sheegatay masuuliyada dilkaas dhacay maanta oo Talaado ah, balse tuhunka ayaa ku dhacaya ururka hubaysan ee Al-Shabaab, kuwaasoo horey u geystay weeraro kan lamid ah.
Bilowgii asbuucaan, isaga oo la hadlayay warbaahinta ku hadasha afka Al-Shabaab, afhayeenka ururka Cali Maxamuud Raage sidoo kale loo yaqaan (Cali Dheere) ayaa wacad ku maray in ay kordhin doonaan weerarada gudaha caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.
December 28, 2016 Maleeshiyada Al-Shabaab oo dib u la wareegay degmada Moqokori kadib markii ciidamada is-bahaysanaya ay baneeyeen
December 11, 2016 Ugu yaraan todobo qof oo ku dhimatay qarax gaari oo ka dhacay banaanka hore ee dekada weyn ee Muqdisho
December 10, 2016 Ugu yaraan labo askari oo ciidamada DFS kamid ah oo ku dhimatay qarax gaari oo ay Al-Shabaab ka geysatay kantarool kuyaala duleedka Muqdisho
October 25, 2016 Ugu yaraan 10 qof oo lagu dilay weerar ay Al-Shabaab ku qaaday saldhig ay AMISOM ku leedahay magaalada Beledweyne
Shirkada Sahal Gas oo sheegtay in ay qiimo dhimis ku samaysay gaaskeeda
Boosaaso-(Puntland Mirror) Shirkada gaaska cunta lagu garsado ee Sahal Gas ayaa sheegtay in ay qiimo dhimis ku samaysay gaaskeeda, sida uu sheegay maamulaha guud ee Sahal Gas Cabdiladiif Cabdulaahi Nuur oo la hadlay warsidaha Puntland [...]